हातखुट्टा मर्किए के गर्ने ? - Health Today Nepal
May 3rd, 2017 स्वास्थ्य सुझाब0comments
के महिला पुरुष, के युवायुवती वा बालबालिका, सबैले कुनै न कुनै कालखण्डमा यो भोगाइ बेहोरेका हुन्छन् । सबै व्यक्तिको सबैभन्दा बढी चाहिँ खुट्टा नै मर्किने गर्छ ।
‘हाम्रो देशमा सबैभन्दा बढी कुर्कुच्चो मर्कने समस्या पाउने गरिन्छ’, हाड जोर्नी विशेषज्ञ डा.चक्रराज पाण्डे भन्छन्, ‘गोलीगाँठोको जोर्नीमा समस्या अर्थात् खुट्टा मर्काइपछि दोस्रो स्थानमा हातको नाडी मर्किने समस्या भएकाहरू बढी हुन्छन् ।’
हाडलाई केही नोक्सान नभई जोर्नीहरूलाई मिलाएर राखेको हाड जोड्ने तन्तु र स्नायु (लिगामेन्ट) सामान्य रूपमा तन्किनुलाई मर्काइ भनिन्छ । सामान्य रूपमा भन्नुपर्दा, लिगामेन्ट तन्किनु र धेरै चुँडिनुभन्दा पहिलेको अवस्था नै मर्कनु हो । शरीरको कुनै अंग विशेषलाई आवश्यकताभन्दा बढी भार दिएर काम गर्ने प्रयास गर्दा वा हामफाल्दा वा खेल्दासमेत यो समस्या निम्तिन सक्छ । शारीरिक गतिविधिमा अलिकति पनि असावधानीले हात वा खुट्टा मर्किन सक्छ । जब जोर्नीलाई अप्राकृतिक अवस्थामा जान बल लगाइन्छ, त्यतिखेर अंग मर्किन सक्छ ।
‘जब कुनै अंगलाई आवश्यकताभन्दा बढी कुनै काम गर्न बल दिइन्छ, त्यो अंग मर्किने सम्भावना बढछ’, नेपाल प्रहरी अस्पताल, महाराजगन्जका हाडजोर्नी शल्य चिकित्सक गोपेशकुमार ठाकुर भन्छन्, ’युवतीहरूमा हाई हिल र प्लेटफार्म सुले गर्दा गोलीगाँठो मर्किने समस्या हालका दिनमा बढी देखिन थालेको छ ।’
विज्ञहरूका अनुसार, बालबालिका, खेलाडी आदि व्यायाम गर्दा वा खेल्दा यस्तो समस्यासँग जुध्नु सामान्य हो । तर कहिलेकाहीँ सानो हाड भाँचियो भने पनि मर्केजस्तो मात्रै लाग्ने गर्छ । यस्तोमा चाहिँ सचेत हुनुपर्छ । डा. ठाकुर भन्छन्, यस्तोमा मर्केको हो कि हाड भाँच्चिएको हो, थाहा पाउनु अति आवश्यक हुन्छ ।’
कहिलेकाहीँ मर्केको जस्तो लाग्छ, तर त्यहाँ हाड भाँच्चिएको वा लिगामेन्ट चँुडिएको हुन सक्छ । मर्केको जोर्नी पहिलाजस्तै चलाउन सकिन्छ वा सकिँदैन, त्यसमा विशेष ख्याल गर्नुपर्छ । मर्केको जोर्नी चलाउन धेरै गाह्रो भए चिकित्सकको सल्लाह लिनैपर्ने डा. पाण्डे सुझाउँछन् । जोर्नी बांगोटिंगो देखिए, खुस्केको भए पनि यथाशीघ्र हाडजोर्नी विशेषज्ञकहाँ जानुपर्छ ।
मांसपेशीको पीडा निको पार्ने एउटा उपाय हो पर्याप्त आराम । यो पनि उपचारकै एउटा प्रक्रिया हो । डा. पाण्डेका अनुसार, हात वा खुट्टा मर्किए तातोपानीले सेक्नु हुँदैन । मल्हम वा तेल लगाएर मालिस पनि गर्नु हुन्न । अलिअलि मर्केको छ भने हल्कासँग इलास्टिक ब्यान्डेज लगाउँदा पनि आराम पाइन्छ । मर्केको ठाउँमा बरफ राख्नुपर्छ, बरफलाई प्लास्टिकमा राखेर । बिहान, बेलुका र दिउँसो गरी दिनमा तीन पटक १५र १५ मिनेट बरफ राख्ने गर्दा सुन्निएको कम हुन्छ, पीडा पनि घट्दै जान्छ ।
Previous article एमालेको घोषणापत्रमा स्वास्थ्यका ६ बुँदा
Next article मुटु र व्यायाम